नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ८ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ८ भदौ २०७५)
on: August 24, 2018 लगानी
नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ८ भदौ २०७५)
२०६६ साल जेठ २७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई २०६७ माघ ६ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको यस कम्पनीले १० ओटा जिल्लाका २४ ओटा शाखा कार्यालयमार्फत कारोबार गरिरहेको छ । विशेष गरी सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गलाई लगानी प्रवद्र्धन गर्नु र स्थानीय स्तरमै पूँजी निर्माण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने कार्यक्रम यस कम्पनीले गर्दै आएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आव २०७४/७५ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार रू. २ करोड ५८ लाख २८ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने कम्पनीको नाफा २३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सञ्चालन नाफा अघिल्लो वर्षको तुनलामा २७ प्रतिशतले घटेकाले नाफा घटेको हो । अघिल्लो वर्ष रू. ४ करोड ३९ लाख ६५ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष भने रू. ३ करोड २० लाख ४३ हजार मात्र सञ्चालन नाफा गरेको छ । गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा करीब ३७ प्रतिशत बढी रू. २ करोड ९६ लाख ५२ हजार कर्मचारी खर्च भएको छ । ४५ प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाएको कम्पनीको जगेडा कोष २१ प्रतिशत बढेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७ करोड ६६ लाख ४६ हजार र जगेडा कोषमा रू. ९ करोड २८ लाख १७ हजार रहेको छ ।
कम्पनीको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासमा ४४ प्रतिशत बढी रू. २४ करोड ६८ लाख ३६ हजार निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने १३ प्रतिशत बढी रू. ७० करोड ५९ लाख ३ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस कम्पनीले रू. १७ करोड ८ लाख ५४ हजार निक्षेप सङ्कलन र रू. ६२ करोड ४० लाख २६ हजार कर्जा प्रवाह गरेको थियो । कम्पनीको लगानीमा रू. ५ लाख रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष रू. १३ करोड ४५ हजार ब्याज आम्दानी भएकोमा रू. ६ करोड ८५ लाख ३० हजार ब्याजमा खर्चिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. ११ करोड ४४ लाख ६० हजार ब्याज आम्दानी गर्दा रू. ४ करोड १४ लाख ३७ हजार ब्याजमा खर्चिएको थियो । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद ब्याज आम्दानी १५ प्रतिशतले घटेको छ ।
स्थिर सम्पत्ति रू. १ करोड ४८ लाख ३५ हजार र अन्य सम्पत्ति रू. ३ करोड ८७ लाख २९ हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति २५ प्रतिशत र अन्य सम्पत्ति १ सय ४७ प्रतिशतले बढेको हो ।
अघिल्लो वर्ष चौथो त्रैमासमा १ दशमलव ९७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको कम्पनीको गत वर्षको सोही अवधिमा भने २ दशमलव ३७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत कम रू. ८५ लाख ४३ हजार खराब कर्जा सङ्कलन गरेको कम्पनीले सम्भावित जोखीम शीर्षकमा रू. ६७ लाख ७३ हजार छुट्याएको छ । निष्क्रिय कर्जा बढे पनि कम्पनीले सम्भावित जोखीम शीर्षकमा भने अघिल्लो वर्षभन्दा २४ प्रतिशत कम रकम छुट्याएको छ ।
कम्पनीको चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) रू. ३३ दशमलव ६९, मूल्य आम्दानी अनुपात ३७ दशमलव ९९, तरलता अनुपात २५ दशमलव ३७ प्रतिशत, कुल सम्पत्तिमा प्रतिफल २ दशमलव ७५ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ७१ दशमलव ८६ रहेको छ । मङ्गलवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम मूल्य रू. १ हजार २८ कायम भएको छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद बढी रहेको थियो । सो अवधिसम्म २ सय ३० कित्ता शेयर खरीद र २ सय कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो । खरीद चाप बढी भए पनि विक्रीकर्ताले बिहीवार विक्री नगरेका कारण कारोबार भने हुन सकेन । कम्पनीको पछिल्लो शेयर कारोबार मङ्गलवार भएको थियो । त्यस दिन यस कम्पनीको १ सय २० कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ६२ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा पुच्छर भएको कालो मैनबत्ती आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा घट्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ६२ दिनको कारोबारमा आरएसआई ओभरसोल्ड जोन (२४ दशमलव ९१ स्केल) मा छ । यसले शेयर विक्री चाप बढेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ६२ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ४० दशमलव ६४ विन्दुमा छ । उतारचढाव मध्यम देखिन्छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ६२ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग नजिकिएका छन् । हालको मूल्य यी दुवै रेखाभन्दा तल छ । मङ्गलवारको शेयर मूल्य रू. १ हजार २८ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार १ सय २८ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।
नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था : मैनबत्ती विश्लेषण (आइतवार, १३ जेठ २०७५)
नागबेली लघुवित्तको मूल्य समायोजन
नागवेलीको ४५.६० प्रतिशत बोनस शेयर सुरक्षित गर्ने मङ्गलवार अन्तिम दिन